UViv ulungiselela enye imveliso yobukrelekrele | IPhone iindaba
Xa uScott Forstall wenza umboniso ukusuka kuSiri kwiminyaka emi-5 eyadlulayo, sinokuthi sabona kuphela ubukrelekrele bokuzenzela kwiimovie zentsomi. Ngokwenyani, andikholelwa ukuba uSiri yisoftware ye-AI (ndicinga ukuba i-AI kufuneka ibe ngaphezulu kakhulu), ukuba ayinguye oqonda okungaphezulu okanye kancinci oko sikucelayo kwaye uphendule kwinto ababeyicwangcisile ngaphambili. Mhlawumbi yile nto ufuna ukuyitshintsha noVivInkampani edale umncedisi obenathi ukusukela ngo-2011 kuzo zonke izixhobo ze-iOS kunye nezinye iimveliso ze-Apple.
Siyazazi malunga neeLebhu zeViv iminyaka eliqela, kodwa azenzanga nto kuba beziyinxalenye ye Iqela elidale iSiri. Ngokutsho kwakhe Washington Post, ngoMvulo olandelayo uViv uzokwazisa umncedisi wakhe wokuqala wobukrelekrele, isoftware ethi, ngokwento esinokuyifunda kwi-tweet evela kuDag Kittlaus, sele ikhule iminyaka emithathu enesiqingatha.
UViv ulungiselela ukumilisela umncedisi omtsha
Ixesha lokubonisa kwiveki ezayo emva kweminyaka emi-3.5 yomsebenzi. https://t.co/s0i6gfu4BX
-UDag Kittlaus (@Dagk) Ngamana 4, 2016
Ixesha lokubonisa liya kuba yiveki ezayo emva kweminyaka emi-3.5 yomsebenzi
Inxalenye yesithathu yeqela elisemva kweSiri ngoku iseViv kwaye bazimisele ukugqibezela iphupha elikhulu elinokuthi likwazi ukwenza okungaphezulu kunoko umncedisi ka-Apple anganakho. Oku kuvakala kufanelekile, kodwa kuya kufuneka silinde de kube ngoMvulo olandelayo ukubona ukuba bayayifumana na into abayifunayo.
I-Viv ijolise ekubeni yinkqubo evulekileyo, engaphezulu okanye engaphantsi njengenguqulelo yokuqala yeSiri ngaphambi kokuba iApple ithenge isoftware ngo-2010. Ngokwaziwa kwayo, ngoku ibandakanya amakhonkco kwizicelo kunye neenkonzo ezinje ngeUber, FTD, SeatGuru kunye neGrubHub . Kwimpapasho yeWashington Post banikela njengomzekelo esinakho odola ipitsa kaDomino ngaphandle kokwenza umnxeba, kwelinye icala ibonisa amandla esoftware yakho kodwa, ngokuqinisekileyo, kufuneka uthethe ngoluhlobo ngomatshini, ingayiyo kungcono ukubiza kwaye uthethe nomntu okanye usebenzise usetyenziso, akunjalo? Ngayiphi na imeko, siza kubona into abasilungiselele yona ngoMvulo we-9 kaMeyi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Abazali bakaSiri uViv balungiselela ukumilisela enye imveliso enkulu yobukrelekrele
Enkosi ngeendaba, masilinde ukubona.